Ogaden News Agency (ONA) – ICDS oo wareysatay Gud.Ku/xigeenka JWXO Maxamad Ismaaciil Cumar
ICDS oo wareysatay Gud.Ku/xigeenka JWXO Maxamad Ismaaciil Cumar
Wareysi dheer oo ICDS ay la yeelatay Gudoomiye Ku-Xigeenka JWXO mudane Maxamad I. Cumar ayuu kaga xogwaramay arima badan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo heerka uu gaaray halganka shacabka S. Ogadenya.
Wuxuu sheegay G/ku-xigeenka jabhadda inuu cadawga la beegsaday shacabka dhibaatooyin farabadan intii lagu jiray abaarihii darnaa ee dalka iyo Geeska Afrikaba ku habsaday. Ujeedada uu ka lahaa cadawga waxay ahayd inuu halganka ku hakiyo oo dadweynaha uu ku qasbo inay joojiyaan taageerada halganka arintaaso aan u hirgalin sida uu sheegay G/ku-xigeenka. Wuxuu sheegay inuu batay baxsadkii ciidanka Itobiya sidoo kale inay maleesiyadii Hawaarinta diideen inay dhufays u noqdaan ciidanka Itobiya. Arimahaa ayaa keenay buu yidhi mudane M. Ismaaciil in looga yeedho Adisababa Cabdi Iley oo lagu maxkamadeeyo waxan ay ugu yeedhaan gamgameyn.
Wuxuu sheegay Gud/ku-xigeenka inay sanadkan jaaliyadaha qaadeem talaabo wax ku ool ah oy meela badan gaadhsiiyeen tacadiyada lagu hayo shacabka Ogadenya. Waxay jaaliyadaha kaga banaabaxeen KT Meles meelkastoo u tagay, halkaasoo uu ka noqday tuke cambaar leh oo xataa uu ka cararay inuu soo hor fadhiisto shacabka iyo maxfalada ay madaxda ku qaabilayeen dadweynaha.
Wuxuu sheegay mudane Maxamad Ismaaciil in meela badan hadda laga hadal hayo in la xaliyo qadiyadda Ogadenya si gobolka GA ay xasiloonaato.
Markii la weydiiyay arinta saxafiyiinta Sweden ee cadawga uu maxkamad ku sheegta uu soo saaray ayuu sheegay in arintaasi ay fadeexad ku noqotay Itobiya lana ogaaday hadda inuu wadanka Ogadenya cunaqabateeyay cadawga oo aan loo ogolayn saxaafadda iyo ururada aan dawliga ahayn toona. Wuxuu sheegay inay saxaafadda caalamka iyo gaar ahaan midda Sweden aad ula socdaan xaalada labadaa saxafi oo markay waayeen meel ay ka galaan say u soo ogaadaan shirkadda shidaalka Lundin ee laga leeyahay dalka Sweden waxyaabaha ay ka qabatay Ogadenya.
Wuxuu gudoomiya ku-xigeenka kula dardaarmaay shacabka inay u midoobaan halganka oo dhibaatada gumaysiga u adkaystaan, sababtoo ah gumaysiga dhaqan kaloo uu yaqaano ayaan jirin aan ka ahayn dilka iyo dhaca iyo kufsiga.
Wareysigan oo meela badan uu kaga xogwaramayo Gud/ku-xigeenka waxaad ka dhagaysataan ICDS maalinta Arbaco idinkooo gujinaya.